Wasiirka ammniga Puntland oo ku dhaawacmay Boosaaso
Mjournal :–Wasiirka Amniga Puntland, Cabdi Xirsi Qarjab, ayaa ku dhaawacmay maanta Is-rasaasayn dhex-martay ilaalada Taliyeyaasha ciidamada Birmad-ka iyo Booliiska Puntland, kuwaaso ku dagaallamay goob ay ka socotay tira-koob ciidan. Dagaalkaan, ayaa sidoo kale waxaa ku...
Ciidammada dowladda oo dib ula wareegay deegaannada Cadalle iyo Ruun-nirgood
Mjournal :–Ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ayaa maanta mar kale la wareegay deegaano u dhaxeeya degmooyinka Cadale iyo Ruun-Nirgood, halkaasoo maalmo ka hor dagaalo culus ay ka dhaceen. Sida ay sheegayaan wararka ciidamada ayaa la wareegay deegaanada Maxaa Saciid,...
Xildhibaan Khadiijo Max’ed Diiriye” xil ka qaadista guddoomiyaha maxkamada sare waan ka xunnahay..
Mjournal :–Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa sharci-darro ku tilmaamay xil-ka qaadista uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Abuukaate Ceydiid Cabdillaahi Ilka-Xanaf. Wareegto uu shalay soo saaray madaxweyne...
Ilka Xanafi” xil ka qaadistii leygu sameeyay ma aheyn mid loo maray sifo sharci ah
Mjournal : — Guddoomiyihii maxkamada sare C/llaahi Ceydiid Ilka Xanaf ayaa sheegay in aan lagu soo war-galin xil ka qaadista lagu sameeyay, kaddib markii maalintii shalay wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in xilkii laga qaaday guddoomiyihii maxkamada...
Cayaar kulul oo caawa dhaxmari doonta kooxaha Real Madrid iyo Man City
Mjournal :–Waxaa caawa fooda is dari doona kooxaha Real Madrid iyo Manchester City, kuwaasoo lugta labaad ee wareega Sema Finalka ku ciyaari doona garoonka Bernabue Stadium ee magaalada Madrid. Ciyaartan oo si aad ah isha loogu hayo ayaa labada kooxood midii adkaata ay u...
Shirkii baarlamaannada Africa oo ka furmay dalka K/africa
Mjournal :–Shirka Barlamaannada Afrika oo Magaalada Johannseburg ka furmay ayaa waxaa ka soo qeybgalay madax ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee Muzambig, madaxweyne kuxigeenka dalka Siraliyon, saddex guddoomiye baarlamaan oo uu ka mid ahaa Guddoomiyaha Barlamaanka...
Waa kuma Ibraahim Iidle Suleymaan guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare
Mjournal :–Guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare ayaa ahaa Garyaqaanka Guud ee Somaliland, kaasoo xilka iska casilay lix maalmood ka hor, iyadoo warqadiisa istiqaalada isagoo ka maqan Hargeysa u gudbiyay Madaxweynaha Somaliland si uu uga aqbalo. Madaxweyne Axmed Siilaanyo...
Madaxweyne Xassan Sheekh oo goob joog u noqday dhaarta guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare
Mjournal :–Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay xaflad lagu Dhaarinayey guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda sare ee dalka ee uu madaxweynahu magacaabay. Xafladda lagu dhaariyay Guddoomiyaha cusub ee maxakmadda sare ee dalka Dr Ibraahim Iidle...
Guddoomiyihii maxkamada sare oo xilkii laga qaaday
Mjournal :–Guddoomiyihii Maxkamadda sare, Caydiid C/llaahi Ilko-xanaf ayaa maanta laga qaaday xilka, waxaana Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka loo magacaabay, Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan. Waa markii ugu horreysay oo Jagada laga qaado Garyaqaan Caydiid C/llaahi...
Xarrakada Al-shabaab oo xilkii ka qaaday guddoomiyahoodii Sh/hoose
Mjournal :–Xarrakada Al-shabaab ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii u qaabilsanaa Gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu magacaabayay Maxamed Abuu Cabdalla. Ninkan ayaa sideed sano ahaa wakiilka Al-Shabaab ee Shabeellaha Hoose, iyadoo aan la bedelin marna Sida ay shaacisay...
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo ka hadlay gabar Soomaaliyeed oo isku gubtay J Nauru
Mjournal :–Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Cumar Hadliye ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya la socoto gabar 21 jir Soomaali ah oo isku gubtay xero qaxooti ku taal Jaziirada Nauro oo ku dhow Australia. Gabadhan oo lagu magacaabo Hodon Axmed Barre ayaa horay...
Gabdihii Soomaaliyeed ee dhawaan isku gubtay Australia oo la geeyay Brisbane
Mjournal :–Wasiirka Laanta Socdaalka Australia, Peter Dutton, ayaa waxaa uu xaqiijiyay in gabadhii Somaliyeed ee isku gubtay Jazeerada Nauru, ay u soo qaadeen Magaalada Brisbane, laguna dabiibaayo Isbitaalka Royal. Wasiirka, ayaa sheegay in gabadhaasi Somaliyeed oo 21 jir...
Madaxweynaha DDSI iyo Galmudug oo ka hishiiyay colaadii Daac-dheer
Mjournal :–Magaalada Jig-jiga ee caasimadda Dowlad-deegaanka Soomaalida-Itoobiya, ayaa waxaa maanta lagu saxiixay heshiis laga gaaray Colaadihii ka dhacday deegaanka Daac-dheer oo ku yaalla Xadka ay labada waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Heshiiskan saxiixiisa ayaa waxaa...
Xarrakada Al-shabaab oo sheegatay madaafiic lagu weeraray xarunta Xalane
Mjournal :–Xarrakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada tiro madaafiic ah oo xalay lagu weeraray Taliska ciidamada Midowga Afrika ee Amisom Xalane, halkaasi oo ay joogaan ciidamo badan oo Afrikaan iyo reer Galbeed isugu jira. War ka soo baxay Shabaabka ayaa lagu...
AU to keep troops in Somalia until peace restored
The African Union said its troops fighting the Al-Qaeda linked militants would remain in Somalia until peace is restored, dismissing reports of a possible force replacement by a UN force. The development comes one day after the UK prime minister David Cameron announced that...
Madaafiic lagu gaaracay xalay xarunta xalane ee saldhiga u ah ciidammada AMISOM
Mjournal :–Madaafiic Hoobiyayaal ah ayaa xalay Saqdii dhexe lagu weeraray xerada Xalane oo ku dhaggan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, halkaasoo u ah talis ciidamada Midowga Afrika ee Hawl-galka Somalia [AMISOM]. Shacabka ku nool degmada Degmada Wadajir iyo...
Baarlamaanka oo ka doodaya hanaanka doorasho ee dalka
Mjournal :–Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya meel marinta hanaanka doorashada ee dalka sanadkan 2016, iyadoo kulanka Baarlamaanka uu hortagayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ah habdhowraha...
Gollaha amaanka oo booqanaya Soomaaliya ka hor bisha Augusto
Mjournal :–Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa bishan socdaal ku tagi doona Soomaaliya, si ay u taageeraan doorashada bisha Agosto dhici doona, sida uu sheegay Safiirka Masar u fadhiya Qaramada Midoobey ahna Madaxweynaha Golaha Ammaanka ee bishan Amr Aboulatta. 15...
Fransisco Madeira”’ ciidammada AMISOM wey sii joogi doonaan Soomaaliya
Mjournal :–Danjiraha midowga Africa ee Soomaaliya, ahna Madaxa Hawl-galka AMISOM, Danjire Fransisco Madeira, ayaa shaaciyay in ciidamada AMISOM ay sii joogi doonaan Soomaaliya illaa ay hawsha loo igmaday ka dhameystirayaan. Hawl-galka AMISOM ee Soomaaliya ayaa la billabaay...
Madaxweyne Xassan Sheekh” wasiirrada waa in ay tayactirtaan wasaarradahooda
Mjournal : — Markii ay meesha ka baxday Dowladdii dhexe ee ciidammada waxaa guud ahaan burburay hey’adihii Dowladda sida Wasaaradihii uu waddanka lahaa, ma aysan suurta galin in ay dhismaan mudadii dowlad la’aanta la ahaa, laakiinse markii uu dalka helay dowladdo kumeel...